Marxuum C/casiis Afrika oo lagu Aasay Muqdisho iyo Siyaasi Su'aal ka keenay Dilkiisa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Marxuum C/casiis Afrika oo lagu Aasay Muqdisho iyo Siyaasi Su’aal ka keenay Dilkiisa
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay agaasimihii Idaacadda dowladda ee Radio Muqdisho C/casiis Maxamed Guuleed (Afrika) oo xalay qarax is-miidaamin ah lagu khaarijiyey.
Meydka Marxuumka Allha u naxariisteee waxa salaadda janaasadda lagula tukaday Masjid ku yaalla xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin uu ka mid yahay Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, wasiiro, xildhibaanno iyo qeybaha bulshada.
Waxaa isla maanta lagu aasay Marxuumka Qabuuro ku yaalla Isbitaalka Xoogga ee Magaalada Muqdisho, iyadoo dad u badan ehelkiisa iyo mas’uuliyiin ay ka qeyb galeen aaskiisa.
Dhinaca kale siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa su’aallo ka keenay qaraxa lagu dilay weriye C/casiis Afrika, isagoo ku dhaliilay madaxweynaha xilka sii jooga Maxamed C/llaahi Farmaajo inuusan xitaa tacsi u dirin.
“Allaha u naxariistee wariye C/casiis Afrika wuxuu ahaa agaasimihii Raadiyo Muqdisho. Wuxuu kaloo ahaa shahiid naftiisa u huray la dagalaanka kooxda argagexisada Alshabaab. Ilaa iyo haatan Vila Somalia, madaxweynaha xilkiisa dhamaaday iyo hay’adda sirdoonka oo uu ka tirsanaa midkoodna uma soo tacsiyeynin” ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
Wuxuu is weydiiyay su’aalaha soo socda: Ma dagaal shakhsi ahbaa kala dhexeeyey? Ma damiir la’aan masuuliyadeedbaa? Mise dilka wax laga ogaa, ama lagu diirsaday?.
Alshabaab ayaa si degdega u sheegatay dilka Agaasimihii Radio Muqdisho, waxayna qoraal kasoo baxay ku caddeeyeen inay muddo dheer daba joogeen.
Previous articleXOG: Wasiirkii xilka laga qaaday oo kashifay Kaalinta RW Rooble ee Siyaasadda Arrimaha dibadda
Next articleGalmudug oo degdeg u bilaabeysa Doorashada Golaha Shacabka (Musharixiin la diiwaan geliyay)